नेपाल आज | अझै १०० वर्षसम्म मुलुक बन्दैन : डा. केसी (भिडियोसहित)
अझै १०० वर्षसम्म मुलुक बन्दैन : डा. केसी (भिडियोसहित)
नेपालका राजनीतिक दल व्यवसायिक व्यापारिक समूह बने
शुक्रबार, १० साउन २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौँ । हालै भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलले नेपालको भ्रमण गरे । उनले नेपालका राजनीतिक दलका नेतासँग भेटे । यो भेटपछि राजनीति तरंगित भयो । पूर्वराजादेखि प्रधानमन्त्रीले भेटेको छैन भनेर प्रष्टीकरण दिए । नेपालको राजनीतिमा खरो, खाँटी र यथार्थ तर्क राख्ने प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले यस भ्रमणलाई अतिरञ्जित गरिएकोको रुपमा लिएका छन् ।
उनको भनाइमा रअ प्रमुखको भ्रमण पनि तेस्रो दिनसम्म पुग्दा मात्रै प्रिन्ट मिडियामा समाचार देखिएको र सानो खबर छापेकाले यो भ्रमणबाट पत्रिका पनि म्यानिपुलेट भएको बताए ।
नेकपाको एकतालाई उनले अपारदर्शी बताएका छन । उनी भन्छन् –‘‘ यो एकता अविश्वसनीय छ । हठात् भएकाले स्वार्थले झेलिएको छ । पदीय कुराका मात्रै एकता देखिन्छ । भएपनि देश र जनताको पक्षमा जाँदैन । ’’ उनले नेपालका राजनीतिक दल व्यवसायिक व्यापारिक समूहजस्ता देखिएको जनाए । अब पुराना नेताले बिदा लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनी भन्छन् –‘‘ यी खोके बुढाहरु ब्रह्मनालसम्म पुग्दा पनि मन्त्री बनाइदेऊ भनिरहेका छन् । यी खोकेहरुले सबै विभाग आफूमातहत राखेर क्षमता भएकालाई आउन नदिने देखिएको छ । ’’
पछिल्लो समय सरकारका हरेक निर्णय विवादित बनेको छ । यसमा नेतृत्वको दोष र विभागीय मन्त्रीको दोष रहेका उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन–‘‘ केटौले व्यक्तिले सरकार चलाएपछि यस्तो हुन्छ । ’’ दूरदर्शिता, परिवक्वता चाहिन्छ । अहिले हलुंगेको थालमा दुध हालेजस्तो चुहिएको अवस्थाझैँ विषादी प्रकरण हो । ’’ उनको भनाइ थियो ।
यस्तो प्रवृत्तिका लागि पात्रको पनि योगदान छ भन्छन् डा. केसी । उनी अगाडि भन्छन् –‘‘जनाद्र्धन गृहमन्त्री भएको भए विप्लवका समस्या यति खरो रुपमा आउँदैनथ्यो कि ? ’’ लोकतन्त्रमा सूसुचित हुने अधिकार सबैमा छ । तर त्यस्तो छैन ।
हेर्नुहोस् डा. केसीसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता :